DHR Myanmar Book Search
Department of Historical Research
and National Library, Myanmar
Librart Usage Guide
Histroical Commission Page
Index of Personal Collections
English Zawgyi Myanmar3
Page 1 of 142 (Total:1415)
တလုပ်မြို့ဆိုင်ရာနာယကမိုဃ်းကောင်းတိုက် အုပ်ဆရာတော်စာ။ တရုတ်မြို့နယ်အတွင်း သီတင်းသုံးနေသော သင်္ဃာတော်တို့၏အထက် ဦးကိုင်နာယက သာသာသောစက ဆရာတော်တို့မှစ၍ ကျင့်ဆောင်ရန်ဥပဒေ တရုပ်မြို့ လက်ကိုင်ဦးကင် နာယကမိုးကောင်း ဆရာတော်။
၁၂၃၆ ခု ကုန်းဘောင်ဂိုဏ်းအုပ် ဆက်သွင်းသည့်စာ ၁၂၃၇ ခ ပြာသိုလပြည့်နေ့ သုဓမ္မာတော်လျှောက်ထားစာ ရှင်ဥတ္ထမပြသက်သေမောင်ကြီးထွက်ချက်၊ (လက်ရှိသက်သေ) ရှင်ဥတ္ထမပြသက်သေရွှေအုံထွက်ချက် (လက်ရှိသက်သေ) ရှင်ကေသကပြသက်သေလက်များ ရှင်ကေသကပြသက်သေငရွှေယာထွက်ဆိုချက်
ရတနာသိင်္ဃရွှေပိုမြို့မှရန်ကုန်မြို့သို့ပေးလိုက်သည့် မေတ္ထာစာလောကာဝေါဟာရ။ စကုဆရာတော်ဘုရား ပို့ချတော်မူသော သန္ဓိမလောမကျမ်းထက် သဂြိုလ်မဏာမ ကျမ်းတက်။ သွေးစမ်းပညာ ဆေးဗေဒင်မှတ်စု။ ဆန်းပတျာဖြန့်ပုုံ ဝန်ရှင်တော်မိုင်းတုံမြို့စားမင်းကြီးထံ မြောက်ဝန်မှူး မင်းကပြန်ပေးရန်စာလက္ခံ တပယင်းမြို့ကိုပေးစာလက္ခံ။
၁၂၀၅ လယ်ယာမြေအမှုလျှောက်ချက်တရားစီရင်ချက် ၁၂၀၄ ငရွှေမာင်လယ်မြေမှုကိုမြင်းတပ်ဗိုလ်ထဲ လျှောက်တင်ချက် ၁၁၄၅ လယ်မြေမှု့နှင့်ပက်သတ်၍ ရွာသူကြီးထွက််ဆိုချက် ၁၁၉၉ နာခံတော်နေမျိုးနော်ရထာပြန်အမိန့်တော်
စီရင်ချက်ဖြတ်ထုံး။ ဗြဲတရော်စားလျောက်ချက်။ သက္ကရာဇ် ၁၁၂၇ ခု တပေါင်းစ္ဆန်း ၅ ရက်၊ ပ္ဖ	မ္ဖက်စားဖြတ်စာ။ ၁၂၀၈ ခု ဝါခေါင်စ္ဆန်း ၄ ရက်၊ တရားသူကြီးမင်းကြီး မဟာမင်းလှသင်္ကြန် ကောက်ချက်။ ဒွိတ္ထိသာဏရကမ္မဌာန်းအနက်။ ကျွန်အမျိုးအစား
၁၂၄၇ ခုနှစ် ငွေချေး၊ လက်စွပ်ပေါင်စာချုပ်။ ငွေချေးစာချုပ် ဈေးစာရင်း လဖက်စာငွေချေးစာချုပ်။ ၁၂၄၇ ခု ကိုယ်နေကျွန်ခံစာချုပ်၊ နှမ်းရောင်းငွေပးစာချုပ်။ လူစာရင်းနှင့်ငွေစာရင်းများ။
ရတနာပူရမြို့တည်မင်း မဟာသကျာသီဟဘုရားသို့ ထွက်တော်မူရာ ပါပဓာတ် အနောက်ဝင်းတော်တံခါးတွင် ခင်းကျင်းရန်၊ နမန္တဘက်ဓာတ်ဘက်ဆင်တော် မြင်းတော်စာရင်း သာလွန်မင်းတရားကြီးပုံတုလွက်ကျောင်းတော်တင် ထွက်တော်မူရာ နမန္တဘက် ဓာတ်ဘက်ဆင်တော်စာရင်း
တလုတ်မြို့ တောင်ဂုဏ်းအုပ်ဆရာတော် ပျံလွန်းတော်မူရာ သင့်တင့်လျှောက်ပတ်စွာ သဂြိုလ််ရန် ဆရာတော်တို့၏ မေတ္ထာတော်နှင့် ဘုန်းတော်ကို ခိုလှုံပါမှသင့်တင့်မည် ဖြစ်ကြောင်းလျှောက်ထားစာ
Myanmar Historical Research Journal, twiceayear in June and December…
I.	Library Timing
III.	Document Issue:…
Archives AND Library (Inscriptions,Manuscript,palm leaf,Parabaiks,…)
Myanmar Historical Commission
Department of Historical Research under the Ministry of Culture, has now published many Myanmar Historical Research Works of the Historical Commission members.…
The national races of Myanmar have residing unitedly in the Union of Myanmar since ancient time withalong history and culture of its own.…
Tagaung Period & Myinsai- Pinya-Sagaing Period
Ancient Rakhine and Mrauk-U Period …
On2February 2007 Universities Historical Research Centre was transferred to the Ministry of Culture and renamed as Department of Historical Research.
Present the monthly seminars with the cooperation of the other Departments in the Ministry of Culture from 2007 to now. …
Texts and Contexts in Southeast Asia (2001). …
Views and Visions in the Literary Heritage of Southeast Asia (2000). …
U Aung Myint
Department of Historical Research and National library, Building 35,Ministry of Culture,Naypyitaw
U Zaw Zaw Htun
Dapibus metus maecenas
Neque urnaanisl suspendisse potenti proin id lectus eget.
Copyright © 2012 - All Rights Reserved - Department of Historical Research